10.000 Ar mantsy raha kely ny vola ilaina amin’izany ankoatra ny fanafody sy ireo kojakoja maro samihafa. Manoloana izany dia hiara-kiasa indray ny orinasam-pifandraisana Airtel sy ny Mobile Hilfe Madagascar, fikambanana havanana amin’ny fanavotana ain’olona. Ireo reny sy zaza no tena voakasik’izany eny fa na dia any amin’ny toerana lavitra andriana aza. Kamiao MidMob no hampiasaina amin’izany hitaterana ireo sahirana sy tsy manan-kialofana entina hotsaboina raha toraka izany koa ireo vehivavy handeha hiteraka. Ho an’ny Mobile Hilfe manokana dia fantatra fa olona an’aliny no efa navotan’izy ireo teo ambavahoan’ny fahafatesana tamin’ny taon-dasa. Efa nanangana ivontoeram-pitsaboana ao Ambovo ihany koa izy ireo ankehitriny. Nomarihin’ny tale jeneralin’ny Airtel Atoa Eddy Kapuku moa fa izao fiaraha-miasan’ny roa tonta nohavaozina izao dia mba hahafahana manampy ireo Malagasy tratry ny tsy fahasalamana tena sahirana izay tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’izy ireo.